uvavanyo oluzenzekelayo ngexesha lokubaleka
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Uvavanyo lokuZenzekelayo ngexesha leSprint
Uvavanyo lokuZenzekelayo ngexesha leSprint
Iqela lam lisebenzisa iSkram ukuphuhlisa usetyenziso lwewebhu. NjengoMatshini oZenzekelayo kwiqela, ndihlala ndicelwa ukuba ndizenzele amabali ngaphakathi kwe-sprint, nokuba umphuhlisi akaligqibanga ibali.
Ukuba ekuqaleni kwe-sprint, ndinexesha lokuzenzekelayo ibali ngexesha le-sprint, kodwa ngasekupheleni kwe-sprint, andifumani ixesha elaneleyo lokuzenzekelayo amabali okugqibela.
Naliphi na iingcebiso malunga nendlela endinokugqiba ngayo ukuzenzekelayo kwamabali ngaphakathi kwe-sprint yangoku?
Umsebenzi ozenzekelayo webali ngalinye kufuneka ube yinkcazo yebali eyenziwe. Ngokufanelekileyo kufuneka ujonge ukuzenzekelayo kumabali ngaphakathi kwe-sprint yangoku.
Indlela yokwenza oku kukuba nesakhelo esizisebenzelayo esikhawulezisa ukubhala izikripthi ezizenzekelayo, ukuze ujonge nje kwimeko kunokuchitha ixesha usenza imisebenzi.
Kwisakhelo sovavanyo lwakho lokuzenzekelayo, kuya kufuneka wahlulahlula iileya. Uluhlu lwesiseko kufuneka lube yikhowudi yesakhelo sesicelo sakho esithetha ngesixhobo esizisebenzelayo, njengeWebDriver.
Umaleko olandelayo zizinto zakho zephepha ezibonisa usetyenziso lwakho. Kwezi klasi okanye izinto zephepha kufuneka ubhale imisebenzi emininzi kulawulo olupheleleyo lokubhala iimeko zomsebenzisi. Kulapho ke kwenzeka khona umlingo kunye nendlela izinto ezenziwa ngayo.
Uluhlu lokugqibela yimeko zakho. Oku kufuneka kubize imisebenzi kwiphepha lakho lezinto. Kufuneka uchaze kuphela into ekufuneka yenziwe kwaye izinto zephepha kufuneka ziyikhathalele.
Ngale ndlela nokuba unexesha elifutshane ekupheleni kwe-sprint, ungakhawuleza wenze iimeko ezizenzekelayo ukuba unesiseko esiqinileyo.
Ukuqhuba iimvavanyo zokuhlengahlengisa ngexesha le-sprint kufuna uqeqesho.
Ubungakanani bovavanyo lokuhlehla luyanda kwaye ke ulondolozo nalo luyonyuka. Kuya kufuneka uyazi ukuba ayizizo zonke iimvavanyo ezifuna ukwenziwa ngokuzenzekelayo .
Kuya kufuneka wenze iimvavanyo ezizenzekelayo ezibonelela ngexabiso kwishishini.
Ungayifaka njani ingcambu ye-s6 verizon
I-Apple yonyusa urhwebo lwe-iPhone ngexabiso nge- $ 15 kwiimodeli ezahlukeneyo
I-iPad Air 4 64GB vs 256GB yokugcina: yeyiphi oyifunayo?
Endaweni yokujonga ngaphandle kweintanethi, iiMephu zika-Apple zikopa ukulinganiswa komsebenzisi weGoogle Maps kwiindawo ezikwi-iOS 14
UCorning ucacisa ukuba kutheni i-Samsung Galaxy Qaphela i-7 kunye neeapos zeGorilla Glass 5 zikrwempa ngokulula